Ukunciphisa ama-gel esiswini | Amadoda aSitayela
ULucas garcia | | Ukunakekelwa komuntu siqu, Indlela yokuphila, Amathrendi
Sibonile kamuva nje ukuthi ukunciphisa okhilimu isisu sinamathela kwabesilisa, kepha bazosebenza ngempela njengoba besho? Ingabe bayohluleka ngokuphelele ngaphandle kokuzijwayeza imidlalo? Esikwaziyo ukuthi okhilimu abazenzi izimangaliso Futhi uma sifuna okuthile okuzosebenza ngempela, kufanele wenze ingxenye yakho encane ukuze ijeli libe nomphumela oyifunayo. Yingakho kufanele sihambisane nayo ngezemidlalo nokudla okunempilo, sisuse amakhalori ngangokunokwenzeka.
Ama-gel akhipha isisu enza ukwandisa ukujikeleza kwegazi ezungeze indawo lapho sibeke khona ukhilimu. Ngalokhu, siqinisekisa ukuthi amafutha awaqongeleli kule ndawo futhi ageleze ngokushesha, afinyelele amanzi angcono esiswini. Kepha lokhu akuwashisi amafutha, ngakho-ke sidinga ukudla ukudla okunempilo nokuzivocavoca umzimba.
Ukuze uthole isisu esinamandla kungcono ukwenza kwamathumbu, yize kufanele siqede amanoni ngokuzivocavoca ukushisa amanoni ngawo i-aerobics njengokugijima noma ukuphotha.
Ama-gel asesiswini avamise ukusetshenziswa yi ubusuku, usebenzisa i- uhlelo olubandayo ukuze igazi ligeleze ngokushesha. Zikhona ngemikhiqizo eyahlukene kepha ezisetshenziswe kakhulu yilezi ezilandelayo:
Somatoline ukunciphisa isisu: Yize inani lingelinye eliphakeme kakhulu (ama-euro angu-41,90), uma ulisebenzisa nsuku zonke liyasebenza ngempela. Kungathatha isikhathi esingaphezu kwamasonto amabili ukuthola imiphumela, kepha ukwenza imidlalo nokudla ngendlela efanele uzobona imiphumela.
Clarins Abesilisa Abdo Fermeté: Ingenye yamanani abiza kakhulu (ama-euro angu-31,90), kulula ukuwamunca futhi awunamabala. Le gel iqukethe i-caffeine yokusiza ukuqeda amafutha. Iphunga layo aliqinile njengamanye ama-gel anciphisa.
I-Biotherm Homme Abdosculpt: inani elihle lemali (cishe ama-euro angama-27 nge-200 ml.). Ishiya isikhumba sakho sibushelelezi futhi sithambile.
IMercadona enciphisa ijeli 9.60: intengo inkulu (ama-euro ama-5 esitsheni esingu-150 ml.) Isetshenziswa njengayo yonke enye futhi inemiphumela efanayo, yize ihamba kancane, kunaleyo eminye.
Ngakho-ke, okufanele sikwenze ukunciphisa amafutha esiswini ukugqoka i- ukudla okunempilo nokunempilo, dlala ezemidlalo bese ufaka ama-gel anciphisa ukukusiza ithoni, kepha akunjalo, kunezimangaliso lapho ufaka la makhilimu. Ngicabanga ukuthi ngizozama eyodwa UMercadona, ukuthi intengo ayiyimbi, futhi ngizokutshela imiphumela.
Isithombe nomthombo | Hola
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Amathrendi » Ukunciphisa ama-gel esiswini